Ogaden News Agency (ONA) – Qadiyada Ogadeniya oo looga hadlay Munaasabadi kulanka Turkida UK
Qadiyada Ogadeniya oo looga hadlay Munaasabadi kulanka Turkida UK
Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka UK ayaa maanta ka qeyb gashay Munaasabad ay soo qaban qaabisay Jaaliyada Turkida ee ku dhaqan wadanka UK. Munaasabadan oo Jaaliyada Ogadeniya ee UK lagusoo casuumay ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay munaasabadan.
Waxaa munaasabadan lagusoo bandhigay Qadiyada Ogadeniya iyada oo tariikhda iyo halganka shacabka somalida Ogadeniya looga hadlay.
Professor Yusuf Cadami ayaa kamid ahaa dadkii matalayay jaaliyada Somalida Ogadeniya ee ka hadlay munaasabadan. Dr Yusuf Cadami ayaa halkaas kasoo jeediyay wacdi diini ah oo uu usoo jeediyay dadkii kasoo qeyb galay munaasabadan. Sidoo kale waxaa uu ka hadlay taariikhda halganka shacabka Somalida Ogadeniya.
Jaaliyada Ogadeniya ayaa waayadanba waday olole ay ku dhex galayso ummada muslimiinta ah oo ay isbarasho iyo aqoon isweydaarsi la leeyihiin si qadiyada Ogadeniya loo gaadhsiiyo dunida islamka.
(Sawirka kore)DR Yusuf Cadami oo Qudbad kasoo jeediyay munaasabada:
Jaaliyada Turkida ee ku nool wadanka UK aya kamid ah jaaliyadaha saxiibtinimada wanaagsan la leh qadiyada Ogadeniya islamarkaasna xidhiidh dheer iyo wada shaqeyni ka dhaxeyso Jaaliyada Ogadeniya ee UK.